MAAMULKA CUSUB EE DHAWAAN LOO MAGACAABAY JAAMACADDA HARGEYSA OO XILKII KALA WAREEGAY MAAMULKII HORE | Toggaherer's Weblog
Maamulka cusub ee jaamacadda Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugala wareegay maamuulkii hore ee jaamacadda, xaflada xilwareejinta ee ay labada maamul kula kala wareegayeen oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Hargeysa waxa ka soo qayb galay gudidda ku meel gaadhka ah ee hogaanka jaamacadda iyo masuuliyiin kale.
Gudoomiyihii hore ee jaamacadda Hargeysa Mr. Cabdi Haybe ayaa hadal uu xafladda ka jeediyay waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in la hirgaliyo sharciga jaamacadda iyo in la tayeeyo waxbarashada waxa kaloo uu sheegay in jaamacaddu u baahan tahay waxbarasho tayo leh.
Mudane Cabdi Haybe waxa kale oo uu ka waramay marxaladihii iyo wax qabadkiisi mudadii uu xilka jaamacadda hayay.
Gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Hargeysa Dr. Xuseen C/laahi Bulxan oo isna munaasibadaa hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay intii tagtooda ah waxba kala hadhi doonin sidii loo horumarin lahaa jaamacadda Hargeysa.
Dr. Bulxan waxa uu intaa ku daray inay xidhiidho farabadan la sameeyeen jaamacaddo badan oo caalamka ka jira iyo jaaliyaddaha Somaliland ee qurbaha ku dhaqan jawaab fiicana ay ka heleen.
Marwo Adna Aadan iyo Cismaan Xassan Mire oo ku hadlayay afka guddida jaamacadda ayaa iyaguna hadalo dardaaran iyo waano isugu jiray halkaa ka jeediyay.
Xafaladda xilwareejinta jaamacaddda waxa kale oo goob jog ka ahaa masuuliyiin ka tirsan jaamacadda Hargeysa oo uu ka mid yahay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Mubaarig Ibraahin Aar, gudoomiye-ku-xigeenka labaad Aamina Xaaji C/llaahi iyo madaxda qaybaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay.